Ifuna ukwenza umehluko emphakathini iDominatus | Eyethu News
Ifuna ukwenza umehluko emphakathini iDominatus
“Abanye abahleli bemicimbi bahlulwa nawukusinika imali yokugibela.”
Iqembu lomculo we-kwaito iDominatus lalishaya elidume ngazo komunye umcimbi elalimenywe kuwo. Isithombe : Sithunyelwe
IQEMBU lekwaito laseDambuza elisungulwe ngonyaka ka 2008 elaziwa ngamaDominatus lithi linesifiso sokwenza umehluko emphakathini bakwazi ukufukula abanye abaculi abasafufusa aziwe nawo banganaki izinto ezingeke zibabuyisele ngalutho.
Leliqembu elinamalunga amathathu okungu-Mnu Sphumelele Cebekhulu (25), Mnu Siyanda Gabela (25) kanye noMnu Spheni Ndarane (23) lithe into elayenza ukuba licule umculo wekwaito ukuthi banesiphiwo kuwo kubalula mabebhala izingoma zivele zizifikele emqondweni.
“Inkinga esike sibhekane nayo njengabaculi ukuthi abanye abahleli bemicimbi abasiseki ngemali bahlulwa nawukusikhokhela eyokugibela. Umculo siwuthatha njengebhizinisi yize kuyikhono asifuni neze ukuthi umphakathi usikhohlwe. Isifiso sethu ukuthi sithole inkampani esizoqopha kuyona iphinde isithuthukise isenze saziwe kulelizwe kanye nakwamanye amazwe,” kubeka bona.
Funda olunye udaba : Bazojeza obhongoza abaphazamise okaKathrada eThekwini
Baqhube bathi okwamanje bebengakalikhiphi icwecwe basakhiphe amasingili bathi kukhona abasanda kuqeda ukuyenza ingoma enesihloko esithi “Esikhonkosini” bathe bakhetha lesihloko ngoba bebona ukuthi kukona konke okwenzekayo kumele uzimisele uphokophele phambili ekufezeni amaphupho akho.
Baphethe ngokuthi uma ufuna ukufeza amaphupho akho kumele uzinikele ungenzi ngoba ufuna udumo.
Usizi kusha umuzi eGeorgetown